Real Madrid Oo Haddaba Kharash Garaysay Lacag Ka Badan 300 Milyan Iyo Shuruuda Ku Xidhan In Pual Pogba Ay La Wareegi Karaan. - Gool24.Net
Real Madrid Oo Haddaba Kharash Garaysay Lacag Ka Badan 300 Milyan Iyo Shuruuda Ku Xidhan In Pual Pogba Ay La Wareegi Karaan.
Real Madrid ayaa haddaba suuqa kala iibsiga xagaagan ku kharash garaysay lacag ka badan 300 milyan yuro, waana lacag wali bilaw u ah hawlgalkii abid ugu waynaa ee ay Madrid suuqa ku galayso.
Real Madrid waxay haddaba dhaaftay lacagtii badnayd ee ay suuqa ku kharash garaysay sanadkii 2009 kii markaas oo ay la soo saxiixatay ciyaartoyda kala ahaa Karim Benzema, Kaka, Xabi Alonso iyo Cristiano Ronaldo.
Xafiisyada Estadio Santiago Bernabeu wali waxay ku mashquulsan yihiin samaynta saxiixyo kale oo muhiim ah laakiin waxaa soo baxaysa shuruud ay tahay in marka hore buuxiyaan si ay lacagta suuqa u sii kordhin karaan.
Real Madrid waxay xalay dhamaystirtay saxiixa Mendy oo ay kooxda Lyon kagala soo wareegtay 48 milyan oo lacagta hore ah iyo waliba 5 milyan oo noqon doonta lacag kale oo ku xidhan wayaabo ay tahay in uu Madrid la gaadho taas oo qiimihiisa ka dhigaysa 53 milyan yuro.
Waxa kale oo ay xagaagan Real Madrid bixinaysaa lacagta ay kula soo saxiixatay Rodrygo taas oo ah 45 milyan yuro waxaana liiska lacagta ay hadda bixinayso ku jirta 50 milyan yuro oo ay bishii January kooxaha Real madrid iyo FC Porto ugu heshiiyeen iibka Eder Militao.
Waxa kale oo ay Real Madrid lacag 60 milyan yuro ah ka soo bixisay xidiga ay shalay saxaafada u soo bandhigtay ee Luka Jovic halka ay 100 milyan oo lacagta hore ah ay ka bixinayso Eden Hazard inkasta oo ay lacagtu noqon doono 130 milyan yuro.
Sidaa daraadeed, waxay Real Madrid haddaba suuqa xagaagan ku kharash garaysay lacag ka badan 300 milyan yuro laakiin sheekada dagaalka ay Madrid ugu jirto in ay ceebtii xili ciyaareedkii dhamaaday iska maydho ayayna waxba ka dhawayn.
Waxay Real Madrid wax walba u samayn doontaa sidii ay ula soo saxiixan lahayd Pual Pobga oo kalidii ku qiimaysan kala badhka lacagta waalida ah ee ay haddaba Los Blancos suuqa soo galisay.
Laakiin waxaa jirta shuruud ku xidhan in ay Real Madrid buuxiso inta ayna samayn saxiixa qaaliga ah ee Pual Pogba taas oo ah in ay ciyaartoyda kooxdeeda hore u sii joogay qaar iibiso si ay lacag 200 milyan ka badan ugala soo baxaan.
Gareth Bale, Isco, James Rodriguez iyo xidigo badan oo kale ayaa noqon kara ciyaartoyda ay Real Madrid ka raadin doonto lacagta looga baahan yahay si ay xisaabta kooxdeeda iskugu dheeli tirto waana arin ay ku qasbayso u hogaansanka sharciga dhaqaale wanaaga Yurub.
Si ay Real Madrid u sii wadi karto lacagta aan hore loo arag ee ay suuqa la galayso, waxay hadda u baahan tahay in ay Bernabeu ka fasaxaan magacyo waa wayn oo ay lacag qaali ah ka samayn karaan waxayna 150 milyan kula soo wareegi karaan Pual Pogba.
Haddii ay Madrid ku guulaysato in ay Pogba lacag 150 milyan ah ku keento, waxay markaas sare u dhaafi doonaan 450 milyan.
Si kastaba ha ahaatee, ilaa hadda Real Madrid ayaa ku hawlan sidii ay Zidane ugu suurtogalin lahayd in uu kooxdiisa ku helo ciyaartoyda uu u baahan yahay ka hor inta aan kooxda laga dirin kuwa aan qorshihiisa ku jirin.